DAAWO:-Guddoomiye Mursal oo Shir Guddoomiyey Kulanka Guddiga Joogtada ah | Saadaal Media
DAAWO:-Guddoomiye Mursal oo Shir Guddoomiyey Kulanka Guddiga Joogtada ah
Kulanka oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacbaka JFS Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sidoo kalena uu goob joog ahaa guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey,waxa uu guddiga joogtada ah ee golaha shacabka uu la qaatay guddiga madaxa banaan ee dib u Eegista iyo Hirgelinta Dastuurka.
Guddiga ayaa guddiga joogtada ah ee golaha shacabka u soo bandhigayay warbixin ku saabsan waxqabadka guddiga iyo intii la aas aasay qaabka ay u shaqeynayeen iyo kulamadii shaqo oo ay yeesheen, sidoo kale guddiga faah faahin ka bixiyay wada shaqeynta ay la leeyihiin guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ee Baarlamaanka Dalka sida uu sheegay guddooomiyaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegisa iyo hirgelinta dastuurka Dr Maxamed Daahir Afrax.
Xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ayaa kulanka ka dhiibtay aragtiyadooda, waxyaabaha ay aadka uga hadleena waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira cutubyada dastuurka ee guddiga ilaa hadDa uu kasoo shaqeeyay iyo arrimaha miisaaniyada.
Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha Shacabka Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey, ayaa sheegay in kan guddoon ahaan ay la socon doonaan arrimaha dib u eegisa iyo hir gelinta dastuurka siddii loo dar dar geliyo.
Guddoomiyaha golaha shacbaka JFS Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka soo xiray ayaa u mahad celiyay guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hir gelinta dastuurka warbixinta kooban oo ay guddiga siiyeen, isaggoo sheegay in golaha shacabka ay sii joogteyn doonaan kulamada ay la qaadanayaan guddiyada madaxa banaan si loola socdo howlaha ay haayaan.